Taageerayaasha Liverpool oo aad uga WALAACAY Maaliiyadii uu Garoonka dhexdiisa isaga badelay Maxamed Saalax kulankii PSG…(Maxay tahay SABABTA?)+SAWIRRO – Gool FM
Kooxda Man United oo diyaar u ah inay xagaaga soo aaddan iska iibiso Paul Pogba & Labada laacib ee ay u aragto bedelkiisa oo daaha laga rogay
Luke Shaw oo Romelu Lukaku ku soo dhoweeyey Tartanka Europa League
RASMI: 14-ka Kooxood ee illaa haatan iska xaadiriyey wareegga 16-ka UEFA Champions League
Napoli oo iska cayrisay macallin Carlo Ancelotti iyo Kooxaha doonaya ee ay ku jirto Arsenal oo meel cidlo ah ka heli kara hoggaamiyahan
Ansu Fati oo rikoor cusub ka dhigay tartanka Champions League, isagoo noqday xiddigii…
Kulammada ugu dambeeya heerka Guruubyada UEFA Champions League oo caawa la ciyaari doono
Barcelona, Chelsea, Borussia Dortmund oo guulo gaaray & dhamaan natiijooyinka kulamadii caawa laga ciyaaray Champions League… +SAWIRRO
Taageerayaasha Liverpool oo aad uga WALAACAY Maaliiyadii uu Garoonka dhexdiisa isaga badelay Maxamed Saalax kulankii PSG…(Maxay tahay SABABTA?)+SAWIRRO
Byare September 20, 2018
(England) 19 Sab 2018. Maxamed Saalax ayaa xalay walaac ku abuuray Taageerayaasha Liverpool mar uu maaliyada garoonka isaga dhex badelay ciyaarta oo socota mar uu soo qaadayay kubbad gees laad ah.
Taageerayaasha isha gor gorka ayaa soo qabtay in Saalax ay weli Faashad kaga duuban tahay garabkii uu ka dhaawacay Sergio Ramos Finalkii Champions League ee kal ciyaareedkii tagay.
Taageerayaasha mayilka adag ee Reds ayaa aad uga naxay in Maxamed Saalax uu weli si fiican uga soo kaban dhaawicii uu ku dhigay daafaca reer Spain afar bilood ka hor maadaama uu weli garabka u duubnaa.
Maxamed Saalax ayaa hoos u dhac wayn laga dareemayaa kal ciyaareedkan cusub.
Kulankii xalay ayaa la badelay isagoon wax gool ah dhalin oo wuxuu xitaa sabab u ahaa goolkii ay PSG ciyaarta uga dhigtay 2-2 ka hor inta uusan Firmino dhalin goolka guusha ee Liverpool waqtigii dhimashada.
Taageerayaasha Liverpool oo ku soo yaacay baraha bulshada ayaa walaac ka muujinayay in Saalax uu weli ka duuban yahay garabka isla markaana uusan si fiican uga soo kaban dhaawicii ka soo gaaray Finalkii Champions League.
Saxaafada Faransiiska oo weerar ku qaaday Neymar kadib guul daradii Liverpool
Cristiano Ronaldo oo Ooyin Jabsaday kadib markii la siiyay Casaan +SAWIRRO